Medicare for Lightweight Wheelchairs. Kushandisa Medicare kumawiricheya ari nyore kana ukashandisa mutengesi akakodzera seTowson Medical Equipment. Kana iwe kana mudiwa wakavharirwa, kana kugara uchishandisa, wiricheya, iwe unoziva kukosha kweichi chidimbu chemidziyo muhupenyu hwako hwezuva nezuva. Unoda wiricheya inovimbika uye inogona kushanda zvakanaka paunoda.
Pingback: Ko Medicare ichabhadhara wiricheya isingaremi? – MhinduroParadise.net